“Kudzai vanhu vemarudzi ose.”—1 PETRO 2:17.
18 VaKristu vechokwadi vanonyatsoteerera zvinotaurwa pana VaRoma 13:1-7. (Verenga) Paunenge uchiverenga ndima iyoyo unonyatsoona kuti “masimba makuru” anotaurwa ipapo ihurumende dzenyika. Chero bedzi Jehovha achidzibvumira, hurumende dzevanhu idzi dzinoita mabasa anokosha neanobatsira vanhu, dzichiita kuti zvinhu zviti dzikamei. Tinoremekedza vane masimba ava patinoteerera mutemo. Tinova nechokwadi chokuti tabhadhara mitero, tanyora zvakanaka chero magwaro api zvawo anodiwa nehurumende kuti tive nawo, uye tatevedzera mitemo yose zvayo ine chokuita nesu, mhuri dzedu, uye mabhizimisi kana kuti zvinhu zvedu. Zvisinei, hatizviisi pasi pevane masimba munyika kana vakati tisateerere Mwari. Asi tinopindura sezvakaita vaapostora vakati: “Tinofanira kuteerera Mwari somutongi panzvimbo pevanhu.”—Mabasa 5:28, 29; ona bhokisi rakanzi “ Masimba Aani Andinofanira Kuremekedza?”
19 Tinoremekedzawo vane masimba munyika nenzira yatinovabata nayo. Dzimwe nguva tingatofanira kutaura navo. Muapostora Pauro akataura nevatongi vakadai saMambo Herodhi Agripa naGavhuna Festo. Varume ava vane zvakaipa zvavaiita, asi Pauro akataura navo achiremekedza. (Mabasa 26:2, 25) Tinotevedzera Pauro, pangava patinenge tichitaura nomukuru mukuru ane masimba kana kuti mupurisa. Kuchikoro, vaKristu vechiduku vanoedzawo kuremekedza vadzidzisi nevakuru vezvikoro uye vashandi. Zviri pachena kuti hatingoremekedzi vaya vanonzwisisa zvatinotenda asi tinoremekedzawo vaya vanopikisa Zvapupu zvaJehovha patinotaura navo. Tingangoti munhu wese hake asinganamati anofanira kungozviona kuti tiri vanhu vane ruremekedzo.—Verenga VaRoma 12:17, 18; 1 Petro 3:15.
20 Kana pava panyaya yokuremekedza hapana watinofanira kusiya. Muapostora Petro akanyora kuti: “Kudzai vanhu vemarudzi ose.” (1 Petro 2:17) Vanhu pavanoona kuti tinovaremekedza zvechokwadi, vangafara zvikuru. Yeuka kuti vanhu vanoremekedza vari kuramba vachiita vashoma. Saka kuremekedza vamwe ndeimwe nzira yokuteerera nayo murayiro waJesu wokuti: “Chiedza chenyu ngachivheneke pamberi pevanhu, kuti vaone mabasa enyu akanaka uye vakudze Baba venyu vari kumatenga.”—Mateu 5:16.